ABO fi ABIN dabalatee paartileen siyaasaa Oromiyaafi Amaaraa tasgabbiin akka bu'uuf waamicha waloo dhiyeessan - BBC News Afaan Oromoo
Dhaabbileen siyaasaa naannoolee Oromiyaafi Amaaraa keessatti socho'an torba rakkoon nageenyaa dhaabbilee barnootaa olaanoo naannolee lamaan keessatti uummame akka dhaabbatuf waamicha dhiyeessan.
Dhaaboleen guyyaa kaleessaa ministira mummee Abiy Ahimad walin mari'atan kunnen Paartii Dimokiraatawaa Amaaraa ADP, Paartii Dimokiraatawaa Oromoo ODP, Adda Bilisummaa Oromoo, Waraaqsa Biyyaalessaa Amaaraa ABN, Kongirasii Federaalawaa Oromoo, Paartii Biyyaalessaa Oromoo fi Adda Mul'ata Hawaasummaa Amaaraati.
Rakkoo nageenyaa dhaabbilee barnootaa naannolee lamaan keessatti uummameen lubbu barattootaa darbef gadda itti dhagahame ibsa waloo kennanin kan himan dhaabbileen siyaasaa kunneen wal jibbiinsi hammaachaa dhufe akka isaan yaaddesse himan.
Walitti bu'iinsi dhaabbilee barnootaa keessatti mul'achaa jiru walitti bu'iinsa sabaafi amantaa ta'aa jiraachuu ibsichi hima.
Ummatootni Oromoofi Amaaraa waggoota sadi yookin afur darbanitti rakkoowwan waloo walin qabsaa'anii furaniiru jijjiiramas fidaniiru jedha ibsichi.
Gaaddisni Hoggansa Oromoo maal murteesse?
Haa ta'u malee yeroo dhiyootii as madaawwan darban tuttuquun barattootni miidhamaa jiraachuufi jibbiinsis hammaachaa dhufuu himan.
Kun immoo yaaddeessaa ta'u fi lubbuu dargaggootaa darbe hanbisuu dhiisun dadhabina isaanii ta'uu dhaabbileen kunneen ibsa baasan irratti eeran.
Gochaalee hammeenyaa kunneen dhaabsisuufi tokkummaa uummattoota lamaanii dhugoomsuuf gahee keenya ni bahanna jechuunis ibsa laatan.
Miidiyaaleen mootummaafi dhuunfaa gochaalee walitti bu'iinsa uuman irraa akka of qusatan kan gaafatan dhaaboleen siyaasaa torban "tarkaanfii seeraa mootummaan rakkinicha furuuf fudhatu ni deeggarra," jedhan.
Marii paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaafi Amaaraa keessa socho'an waliin Kamisa Waajira Ministeera Muummee keessatti taasisanii MM Abiy Ahimad (PhD) rakkoon uumamaa jiru tokko madaa isa kaanii sirriitti hubachuu dhabuudhan jedhan.
Madda Rakkoofi Furmaata
Maddoota rakkoolee nageenyaa uummamanii fi furmaata isaanii irratti haalaan mari'achuu isaanii kan himan dhaaboleen siyaasaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessati socho'an kunneen garaagarummaa qaban mariidhaan hiikuf, dhimmoota irratti walii hin galle ammo sagalee uummataan furuuf waliigaluu isaanii himan.
"Mariin eegalame tarkaanfii seena qabeessadha" kan jedhan dura ta'aan Kongirasii Federaalawaa Oromoo Proofessar Mararaa Guddinaa "Sochiin barattootaa kanaan dura mootummaa irratti kan xiyyeefate ture amma garuu dhimmichi walitti bu'iinsa waliinii ta'eera" jedhan.
Rakkoo amma uummameef sababootni heddu akka jiran kan himan Proofesar Mararaan ilaalchi dhimma Itoophiyummaa fi tokkummaa Itoophiyaa irra jiru, siyaasni shira irratti hundaa'e, siyaasni wal amantaa hin qabne fi ofittummaan sababoota rakkoolee kunnen keessaa muraasa jechuun himan.
Rakkoolee kunnen furuu fi biyya garee hunda bifa qixa ta'en simattu ijaaruuf mariin eegalame itti fufuu akka qabu Proofesar Mararaan dubbatan.
Dhaabni siyaasaa kamiyyu jechaanis ta'e gochaan dhimmoota uummataaf uummata walitti buusan irraa akka of qusatan waliigaluu isaanii kan dubbatan immoo Hayyu-duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaati.
Gama biraatin "dhimmi seera kabachiisuu dhimma mootummaa qofaaf dhiifamu miti" kan jedhan dura taa'aan Adda Mul'ata Hawaasummaa Amaaraa Obbo Suyyum Mangashaa qaamoleen ajandaa ofii milkeessuuf walitti bu'iinsatti fayyadaman gochaa isaanii irraa akka of qusatan qooda isaanii bahachuuf waliigaluu isaanii himan.
Dhaabbilee siyaasaa kunneen gidduutti garaagarummaan ilaalchaa bal'aa jiraatullee mariiwwan gaagarummaa jiru dhiphisan gara fulduraatti akka qophaa'an fi uummattoota lamaan gidduuttis wal hubannoon akka jiraatuf akka hojjetan kan himan immoo dura taa'aa Waraaqsa Biyyaalessaa Amaaraa ABIN Dooktar Dassaalany Caanneeti.
Dhaabbileen siyaasaa ibsa waloo kennan kunneen rogeeyyiin, abbootin amantaa, jaarsoliin biyyaa, miidiyaalee fi hawaasni hundi tumsa nagaa buusuuf taasifamuf akka gumaachan waamicha dhiyeessaniiru.
'Rakkoon uumamaa jiru tokko madaa isa kaanii sirriitti hubachuu dhabuudha'
Marii kana irrattii hoggantoonni paartilee siyaasaa naannolee Oromiyaafi Amaaraa keessa socho'an kan irratti hirmaatan yoo ta'u, Gaaddisni Hooggansa Oromoo marii kanarra tureera.
MM Abiy Ahimad marii kana irratti dubbii taasisaniin, yeroo dhihooti as waldhabdeen ummata lamaan gidduu baay'achaa dhufeera jedhan.
Walgahichi kan gaggeeffame naannoole lamaanitti lubbuun namaa darbuufi qabeenyi barbaaduun walqabatee yoo ta'u, paartileen morkattoota naannoole lamaanii keesatti sochii gaggeessan fedhii ummataafi adeemsa boruu irratti xiyyeeffachuun akka qabaniif marii taasifamedha.
Dooktar Abiy lammiilee irratti miidhaa tokko otuu hin qaqqabsiisiin hirmaanaa siyaasaa gaggeessun barbaachiisadha jedhan.
Dooktar Abiy hoggantoonni siyaasaa naannoolee itti hojii keessaan hojjetanitti nageenyaafi tasgabbii buusuuf ga'ee isaanii akka bahatanillee gaafataniiru.
"Yeroo dhiyoon asitti naannolee lamaaniifi ummattoota lamaan gidduutti sababii ofii isaaniifi humnoota alaa biroorraa kan ka'een hokkarri, walitti bu'insiifi walgaarerfachuun irraan kan ka'e lubbuun namootaa darbuu babal'ataa dhufeera."
Tarii waldhabdeen siyaasaa yoo jiraatan, lubbuun namaa osoo hin badiin, waliin dubbachuudhaan, waldhabdeen seenaa yoo jiraatanis lubbuun namaa osoo hin badiiniifi qabeenyi osoo hin manca'iin karaa waliin dubbachuudhaan ta'uun namoonni walirraa barachuun waliin jiraachuu akkaataa ittiin danda'anirratti hojjechuu feesisas jedhan.
"Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti seerri taphichaa warra taphatan birattis ta'e warra daawwatan birattis sirriitti kan beekame miti.
Dirree taphaarra warri jiranis taphicha sirriitti hin beekan; daawwattoonnis akkasuma.
Sababa kanarraan kan ka'e, balaawwan uumaman kanneen lubbuu namaa balleessaniifi qabeenya mancaasan akka salphaatti bira darbamaa jiru."
Akka Dooktar Abiy jedhaniti paartileen naannoo Amaaraa keessa socho'an, naannoo Oromiyaa deemanii miidhaafi mufii naannoo Oromiyaa jiru carraan ittiin baran osoo uumamee, akkasumas paartileen naannoo Oromiyaa keessa socho'anis dhukkubbii Amaaraa keessa jiru haalli ittiin hubatan jiraachuu feesisa.
Akkaataa amma jiru kanaan itti fufnaan rakkisaa ta'uu ibsuun falli waloon akka barbaachisu hubachiisaniiru.
"Maanguddooni du'aa, barattoonni du'aa waliin jireenyi haaloon akka haaraatti uumamaniin waan kan yaaddessaa deemu ta'e balaa keessa akka hin seenneef, waliin jiraachuu gaaffii keessa akka hin galchinetti wal mariyannee kallattii waloo qabannee waliin akka hojjennuufi nageenyaafi walabummaa biyyaaf waliin dhaabbachuun waan barbaachisuuf."
'Nageenya tiksuuf mootummaan of keessa ilaaluu qaba'
Marii Waajira Ministeera Muumee kanarratti kan argaman Hayyu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa dhaabbilee siyaasaa haala ummata walitti hin buufneen akka gaggeessan mari'achuu BBC'tti himaniiru.
"Paartileen, warri [aktivistootaa] miidiyaaleen hundi isaanii bifa ammayaawaa ta'een akka itti siyaasa ooffatan, waan seenaa darbes haa ilaalu waan siyaasa ammaa haa ilaalu karaa nagaan ta'uu qaba.
Hayyu Dureen kun yeroo ummatiifi ummati kan walitti bu'aa jiru fakkaatu kanatti, keessattuu dargaggoonni bifa lubbuu namaa hin gaafanneen siyaasa akkamiin gaggeeffachuun danda'amu irratti dubbachuu ibsan.
Mootummaan of keessa ilaaluun irra jiraata...
Rakkinni humna caasaa mootummaa keessas yoo jiraate, nageenya tiksuudhaaf mootummaan of keessa ilaaluun irra jiraata.
Akkasumas miseensota dhaabotaa gara nagaa booressuutti kan geessan akka hin jiraanne kan jedhurratti marii jalqabuudhaaf.
Paartilee siyaasaa gidduutti waliin haasa'uun jiraachuun ni fayyada kan jedhan Obbo Daawuud, rakkinoota furuun, walhubannoo uumuuf, akkasumas garaa garummaa waliis adda baafachuuni gargaara jedhan.
Rakkoo nageenyaa Yunivarsiitii Woldiyaa: Yunivarsiitiiwwan keessatti barumsi adda cite, waraanni bobbaafame
10 Sadaasa 2019